राजनीतिबाट टाढा रहेका विपि कोइरालाका भतिजको वर्षा मोह, बलिउड हिरोइनको शैलीमा भिजे
काठमाडौं । झ्याप्प दार्ही र हसिलो मुहार । आधा झरिसकेको कपाल । पानीमा रुझ्दै नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका भतिजा तथा केशव प्रसाद कोइरालाका छोरा निरञ्जन कोइरालाले फोटो सार्वजनिक गरेका छन् ।
नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएका निरञ्जन राजनीतिबाट टाढा नै रहे । घुम्न रुचाउने उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् । त्यसैले उनको पोष्ट र फोटो सार्वजनिक भइरहन्छ ।
यसपटक दिल्लीको झमझम वर्षामा भिज्दै बलिउड नायिकाले अभिनय गर्न सक्छिन् भने पुरुषले किन सक्दैन भन्ने आशयको पोष्ट गरेका छन् । निकै प्रतिक्षापछिको पानी परेको खुशी मनाएका छन् निरञ्जनले । उनले के
ही बलिउड स्टाइलमा रुझेको भन्दै लेखेका छन्, अभिनेत्रीले यस्तो गर्न सक्छिन् भने अभिनेताले किन सक्दैनन् ? तस्वीरमा छाताले शरीको बीचको भाग छोपेपनि अरु भाग नग्न रहेको छ वीपीपुत्रको । दार्श्निक शैलीमा उनको पोष्ट बेला बेलामा हेर्न पाइन्छ ।
निरञ्जनले पहिलो पत्नीको निधनपछि दोस्रो विवाह गरेका थिए । तर, दोस्रो पत्नीको पनि विवाह गरेको केही वर्षमै निधन भएको थियो । उनी अहिले यसरी नै लोप्रोफाइल जीवनमा रमाइरहेका छन् ।
उनका भाई डा. शेखर कोइराला राजनीतिमा सक्रिय छन् । तर, निरञ्जनले राजनीतिबाट टाढा रहने निर्णय गरेर दिल्लीमै बस्दै आएका छन् । तस्वीरः सामाजिक सञ्जाल
हृदयश त्रिपाठीको प्रश्नः गलत नागरिकता दिनेलाई कारवाही किन भएन?
उनले नागरिकता ऐन अनुसार गलत नागरिकता प्रदान गर्ने माथि कारवाही भएको सुन्नमा नआएको भन्दै गलत नागरिक दिने अधिकारीलाई कारवाही गरेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। ‘नागरिकता त खारेज गरियो, नागरिकता दिनेलाई कारवाही भयो कि भएन? कति जनामाथि कारवाही भयो। ती आफै बजारबाट किनेका नागरिकता लिएको होइन होला,’ उनले भने, ‘आफैंले निर्माण गरेको आफैले हस्ताक्षर गरेको होइन होला। प्रमाणपत्र दिने अधिकारी माथि के–के कारवाही भयो त्यसको जानकारी सदनले पाउनुपर्छ।’
ज्ञानेन्द्र फेरि राजा बन्ने सनसनीपूर्ण खुलासा
राजनीतिक विश्लेषक डा. अरुणकुमार सुवेदीले नेपालमा फेरि ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्ने सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन् । सोमबार राति प्राईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको “जनता जान्न चाहन्छन्” कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा हिन्दूराष्टपनि पूर्नस्थापना हुने दाबी गरेका छन् ।
सुवेदीले देशको पछिल्लो अवस्था शिथिल रहेको बताएका छन् । देशको राजनीतिक प्रणालीमा नै त्रुटि रहेको उनको दाबी छ । नेपालको नयाँ संविधान नेपाली जनता र देशको लागि अभिषाप साबित हुनेछन् भनेर आफुहरुले संविधानको मस्यौदा गर्दाखेरि नै बोलेको पनि उनले स्मरण गराए । आफू सांस्कृतिक राष्टवाद भएकोले कसैले हिन्दूवादी भनेर भन्दापनि आपत्ति नहुने सुवेदीको भनाई छ ।
छिमेकी देश भारतले नेपालमा धर्म्निरपेक्षतालाई हटाउन चाहेको र त्यसको सट्टामा हिन्दूराष्ट बनाउन खोजेको पनि उनले आफ्नो विश्लेषण सुनाए । नेपालको सिस्टमसंग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्टपति सी जिनपिङ दुवै असन्तुष्ट रहेको सुवेदीको टिप्पणी छ ।
सर्पदंश उपचार सेवा शुरु
नवलपरासी पूर्वनवलपुरको कावासोती–१६, डण्डामा रहेको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा सर्पदंश उपचार सेवा शुरु गरिएको छ । सामुदायिक अस्पतालको रुपमा रहेको अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएसँगै यहाँबाट सर्पदंशको उपचार सेवा थप गरिएको हो ।
सहकारीले कृषि उपज बिक्री केन्द्रसहित शित भण्डार र बीउ बैंकसमेत स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको सहकारीका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । रैथाने प्रजातिका बीउ हराउँदै जान थालेको भन्दै यसको संरक्षणका लागि बीउ बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।